Ferrari World Abu Dhabi & Dubai Tour Package
Dubai Getaway na Abu Dhabieze 212022-05-23T17:14:59+05:30
Ferrari World Abu Dhabi, Warner Bro's Abu Dhabi, Yas Waterworld Abu Dhabi
Abalị 04 na -anọ na nkwari akụ Four Star Dubai gụnyere nri ụtụtụ.
02 Nọrọ abalị n'abalị anọ na nkwari akụ Abu Dhabi gụnyere nri ụtụtụ.
Interhotel na-ebufe site na Dubai Hotel gaa na Yas Island Hotel na ndabere nkeonwe.
Nweta ohere na-akparaghị ókè na ogige Okwu na Yas Island (ogige 01 kwa ụbọchị).
Ọdụ ụgbọ elu na -ebugharị site na Abu Dhabi Hotel gaa n'ọdụ ụgbọ elu mba Dubai na ndabere nkeonwe.
Ụbọchị 4 na nke 5:
Nwee obi ụtọ nri ụtụtụ na nkwari akụ. Lelee ụlọ oriri na ọṅụṅụ Dubai ma nyefee Abu Dhabi - Yas Island Hotel na nzuzo. Onye ọkwọ ụgbọ ala anyị ga-erute na họtel n'oge maka ịnyefe interhotel. Banye na họtelu Yas Island wee dịrị njikere ịhụ ogige ntụrụndụ isiokwu na Yas Island: (01 Park kwa ụbọchị)
Ferrari World Abu Dhabi: Lovehụnanya ọsọ? Mgbe ahụ, kwadebe maka ịnya ndụ gị naanị ebe a na Ferrari World Abu Dhabi. Ebe obibi nke rollercoaster kacha ọsọ n'ụwa, ịgba ọsọ akaghị elu, usoro oghere oghere kachasị elu nke arụtụrụla na mbara ụwa yana ihe nkiri 40 na-emebi emebi, nke a bụ ebe kacha mma maka enweghị nkwụsị, hyper-adrenaline, egwuregwu ịgba ọsọ obi!
Warner Bros. World™ Abu Dhabi: Ogige ntụrụndụ ime ụlọ kachasị n'ụwa Banye Warner Bros. World™ Abu Dhabi wee buga ya gaa na ụwa dị egwu nke ime ihe na ihe egwuregwu, whimsy na wackiness ozugbo na eserese eserese na ihe nkiri kachasị amasị gị!
Yas Waterworld Abu Dhabi: Ogige mmiri kacha mma n'ogige mmiri a họpụtara ahọpụta Nwee anụrị ihe karịrị 40 ịnya ọgba aghara, ihe nkiri na ahụmịhe maka ọkwa niile na-atọ ụtọ. Nwee ahụmịhe nturu ugo zuru ụwa ọnụ na-eme mmemme mmụọ Emirati. Chọpụta ụwa nke splashtastic fun. Kwuo ee maka njem mmiri kachasị mma nke ndụ gị na Yas Waterworld Abu Dhabi!
Ọrụ ụgbọ mmiri ekele si Yas Island Hotel ruo ogige Okwu.
N'abalị na-anọ na nkwari akụ.
Ụdị ụlọ: Ụlọ Deluxe / Ime ụlọ kacha elu price
Ịkekọrịta Otu $ 1,045
Ịkekọrịta ugboro abụọ (ọnụego otu onye) $ 609
Agba okenye ọzọ Hapụghị
Ịkekọrịta ụmụaka na -enweghị akwa ọzọ $ 365
Nkata ụmụaka na akwa ọzọ Hapụghị
Aha ụlọ nkwari akụ: Grand Excelsior Bur Dubai ma ọ bụ ihe yiri ya
Aha ụlọ nkwari akụ: Ramada Downtown Abu Dhabi ma ọ bụ ihe yiri ya
Typedị :lọ: Ụlọ Elu